Inaliti yokubumba - iMestech Industrial Limited
Inaliti zeplastiki yokubumba yeyona nto isetyenziswayo phakathi yokubumba yeplastiki. Inaliti zeplastikhi ezibunjiweyo zisetyenziswa ngombane, umbane, umbane, ezonyango, ezothutho, imoto, ukukhanya, ukhuselo lokusingqongileyo, ukhuseleko, izixhobo zasekhaya, izixhobo zemidlalo kunye namanye amashishini kunye neemveliso.
Yintoni udini ziphene? Inaliti yeplastiki yokubumba yinkqubo yokuvelisa iindawo kuluhlu oluthile lobushushu, ngesikrufu esonyibilikisa izinto zeplastiki ezinyibilikiweyo, inaliti yoxinzelelo oluphezulu kwisisu sokubumba, emva kokupholisa nokuphilisa, ukufumana indlela yokubumba. Le ndlela ilungele ukuveliswa kwebhetshi yamalungu anzima kwaye yenye yeendlela zokulungisa ezibalulekileyo. Kukho amanqanaba ama-6: ukuvala ukungunda, ukunyibilika ngenaliti yeplastikhi, ukugcina uxinzelelo, ukupholisa, ukuvulwa komngundo kunye nokukhutshwa kwemveliso. Isantya, uxinzelelo, isikhundla (ukubetha), ixesha kunye neqondo lobushushu zizinto eziphambili ezi-5 zokubumba ngenaliti.
Izinto ezintathu zeyunithi yokuvelisa inaliti
Ukusetyenziswa iimveliso ziphene sukube
(1) kwiimveliso ze-Elektroniki: .Ukunxibelelana ngeemveliso zombane kunye nezinto zombane zabathengi (izindlu zeplastikhi, indawo ebiyelweyo, ibhokisi, ikhava) Iifowuni eziphathwayo, iihedfoni, oomabonakude, iifowuni zevidiyo, oomatshini bePOS, intsimbi yokungena.
(2) kwizixhobo zasekhaya: Umenzi wekofu, ijusi, ifriji, isixhobo sokupholisa umoya, iwash fan
(3) kwizixhobo zombane: Imitha yombane, ibhokisi yombane, ikhabethe yombane, isiguquli sokuhamba rhoqo, isiciko sokugquma kunye nokutshintsha
(4) kwizixhobo zonyango kunye nezonyango kunye nezixhobo: Izibane ezisebenzayo, i-sphygmomanometer, isirinji, i-dropper, ibhotile yeyeza, i-massager, isixhobo sokususa iinwele, izixhobo zomzimba
(5) kwezemoto: Isakhelo somzimba weDashboard, isibiyeli sebhetri, imodyuli yangaphambili, ibhokisi yolawulo, isakhelo senkxaso yesitulo, indawo yokugcina izinto, ifender, bumper, isiciko se-chassis, isithintelo sengxolo, isakhelo somnyango esingasemva.
(6) Kwizixhobo zeshishini: Iphaneli yesixhobo somatshini, izixhobo, iswitshi, ukukhanya.
(7) Isixhobo sezithuthi kunye nezixhobo zeZithuthi (isiciko sesibane, indawo ebiyelweyo) Isibane somqondiso, uphawu, umvavanyi wotywala.
Umngundo, umatshini yokubumba inaliti kunye nezinto zeplastiki zokwenza iyunithi esisiseko yokubumba ngenaliti. Umngundo kunye nenaliti umatshini yokubumba sisixhobo semveliso, kwaye izinto zeplastiki eziluhlaza zisetyenziselwa ukwenza imveliso.
1. ngenaliti ngumngundo
Inaliti nokuvunda luhlobo isixhobo ukuvelisa iimveliso zeplastiki; ikwasisixhobo sokunika iimveliso zeplastiki ubume obupheleleyo kunye nobungakanani obuchanekileyo. Inaliti yokubumba luhlobo lwenkqubo yokulungisa esetyenzisiweyo kwimveliso yebhetshi yamalungu athile antsonkothileyo. Ngokukodwa, iplastikhi enyibilikileyo itofwe kwisibumbeko ngomatshini wokubumba ngenaliti phantsi koxinzelelo oluphezulu, kwaye imveliso ebunjiweyo ifunyanwa emva kokupholisa nokuphilisa. Inaliti nokuvunda zingahlulwa ngokweendidi ezahlukeneyo ngokungqinelana nobume ezahlukeneyo sokubumbela, iimfuno zoyilo imveliso, imo imveliso kunye nofakelo kunye nokusetyenziswa imo.
Ngenxa yexabiso eliphezulu lokuvelisa, kodwa ubomi babo obude kunye nokusebenza okuphezulu kwemveliso, zihlala zisetyenziselwa ukuvelisa ubunzima. Inaliti nokuvunda kusetyenziswa imveliso mass amalungu zeplastiki. Inani elikhulu iimveliso zeplastikhi-ngobuchule, ekwabelaneni kakhulu iindleko zemveliso nokuvunda, ngoko ke iindleko yokuvelisa inaliti imveliso imveliso enye liphantsi kakhulu kunaleyo ezinye iindlela processing. Kukho izigaba ezithathu zoyilo lokungunda kunye nokuqinisekisa ukungunda.
(1) uyilo Ikubumbe:
Uyilo lomngundo lusekwe kuyilo lwemveliso, ukusetyenziswa kwesoftware yoyilo, ngokwenqanaba lokuvelisa ukungunda kwenkqubo yokulungisa kunye nenqubo yokubumba inaliti, uyilo lwendlela yokubumba, iinxalenye.
(a) Inyathelo lokuqala kukuhlalutya uyilo lweemveliso zeplastiki
(b) Inyathelo lesibini kukukhetha izinto zokufa
(c) Inyathelo lesithathu kuyilo lobumbeko loyilo
(d) Inyathelo lesine kukuyilwa kwamalungu
(2) processing zomngundo
Ukulungiswa komngundo ikakhulu kukuqhubekeka ngomatshini ukugqibezela uphononongo lokuzoba → ukulungiswa kwezinto → ukuqhubekiswa → ukuqhubekeka kwesiseko sokubumba
Umjikelo wokuqhubekeka wokubumba ngenaliti kuxhomekeke kubunzima kunye nenqanaba lokulungisa ukungunda. Umjikelo wemveliso ngokubanzi ziintsuku zokusebenza ezingama-20-60. Umatshini osetyenziswa kulungiso lokulungisa: i-CNC, i-lathe, umatshini wokugaya ngokubanzi, i-grinder yomhlaba, i-EDM, i-WEDM, kunye nokuhlangana kwezixhobo zesandla, izixhobo zokulinganisa, njl.
(3) Iindidi ngumngundo ziphene:
Inaliti nokuvunda lungahlulwa-hlulwa ngokweendidi ezahlukeneyo ngokwendlela nokuvunda, iimfuno zoyilo imveliso, imo imveliso kunye nofakelo kunye nokusetyenziswa imo.
(a) Ukubumbela iipleyiti ezimbini: ekubumbeni ngenaliti, ukungunda okuhambayo kunye nokubumba okungaguqukiyo kwesikhunta kuyahlulwa, emva koko iinxalenye zeplastiki zithathwa, ezaziwa nangokuthi kukungunda kwepleyiti kabini. Kuyinto elula kakhulu kwaye esisiseko zeplastikhi ngenaliti ngumngundo. Inokuyilwa njengokubumba kwenaliti enye okanye ukubumba inaliti yenwebu ngokweemfuno. It is a sokubumba inaliti esetyenziswa ngokubanzi. Umngundo yokubumba inaliti okanye inaliti enye yokubumba,
(b) Umngundo weepleyiti ezintathu: okwaziwa ngokuba kukungunda okuphindwe kabini. Xa kuthelekiswa ne-engaphandle-inaliti yangaphandle ngenaliti ukungunda, ulwahlulo ngenaliti ngenaliti ngumngundo wongeza isihlwili ngokuyinxenye eshukumayo kumacandelo umngundo esisigxina ukwenzela ingongoma isango sokubumba. Ngenxa yesakhiwo sayo esimbaxa kunye neendleko eziphezulu zokuvelisa, ngokubanzi ayisetyenziswanga ekubumbeni kwamalungu amakhulu.
(c) Umngundo wembaleki eshushu: ubumba wembaleki eshushu ubhekisa kukungunda okusebenzisa isixhobo sokufudumeza ukwenza ukunyibilika kwisitishi kungomisi ngalo lonke ixesha. Ngenxa yokuba isebenza kakuhle ngakumbi kunokwenziwa kwemveliso yokubumba, kunye nokugcina izinto ezingasetyenziswanga, kushushu imbaleki eshushu kangaka kumazwe ahambele phambili kwimizi-mveliso nakwimimandla esetyenziswa ngokubanzi. Inkqubo yembaleki eshushu inenye inkqubo yembaleki eshushu ngakumbi kunesikhunta esiqhelekileyo, ke iindleko ziphezulu.
(d) Umbala wesikhunta ezimbini: ngokubanzi kubhekiswa kuzo njengeendidi ezimbini zezinto zeplastiki kumatshini wokubumba wenaliti efanayo, ukubumba okubini, kodwa ukubumba kwemveliso kube kanye kuphela. Ngokubanzi, le nkqubo yokubumba ibizwa ngokuba yinaliti yokubumba kabini, edla ngokugqitywa siseti yokubumba, kwaye ifuna umatshini okhethekileyo wenaliti yokubumba.
(4) Inkqubo esezantsi yokwakha yenaliti ukungunda ngolu hlobo lulandelayo
Ukubumba kwenaliti ngokubanzi kwenziwa zezi nkqubo zingaphantsi:
(a) Inkqubo yokubamba. Ibhekisa kumjelo weplastikhi wokuhamba kumbumbulu ukusuka kumbhobho wenaliti ukuya kwisisu. Inkqubo yesango eliqhelekileyo yenziwe nge-sprue, umhambisi, isango kunye nomngxunya obandayo.
(b) Ukwahlula ecaleni kunye neendlela ezingundoqo zokutsala.
(c) Indlela ekhokelayo. Kwisikhunta seplastikhi, ubukhulu becala inomsebenzi wokubeka, ukukhokela kunye nokuthwala uxinzelelo kwicala elithile ukuqinisekisa ukuchaneka kokuhamba kunye nokuvalwa kokungunda okungaguqukiyo. Inkqubo yokuvala isikhokelo esenziwe yintsika yesikhokelo, umkhono wesikhokelo okanye umngxunya wesikhokelo (uvulwe ngokuthe ngqo kwitemplate) kunye nendawo yokuma komhlaba.
(d) Inkqubo yokukhutshwa / yokonakaliswa. Kubandakanya ukutyhala ngaphandle kunye nendlela engundoqo yokutsala. Kusetyenziswa ikakhulu ukukhupha iinxalenye ekubumbeni. Iqulethwe yintonga ye-ejector okanye i-pipe jacking okanye iplani yokutyhala, i-ejector plate, i-ejector intonga yeplate echanekileyo, intonga yokusetha kwakhona kunye nentonga yokudonsa.
(e) Inkqubo yolawulo lobushushu. Izixhobo zokupholisa kunye nokufudumeza.
(f) Inkqubo yokukhupha.
(g) Ukubumbela iinxalenye zibhekisa kumalungu enza umngundo. Oku ikakhulu kubandakanya: ngenqindi, fa ababhinqileyo, core, ukwakha intonga, ukwakha umsesane kunye faka.
(h) Amalungu alungisiweyo afakiweyo. .
(5) Izinto ekubunjweni
Umngundo weplastikhi uquka ukungunda kwe-thermoplastic kunye ne-thermosetting mold mold. Isinyithi sokubumba kweplastiki kufuneka sibe neepropathi ezithile ezinje ngamandla, ubulukhuni, ukunxiba ukumelana, uzinzo olushushu kunye nokumelana. Ukongeza, kuyafuneka ukuba kube nokuqhubekeka okuhle, okunje ngonyango oluncinci lobushushu, ukusebenza okungcono kokusebenza, ukumelana nokubola okungcono, ukugaya kunye nokusebenza kokucoca, ukusebenza okungcono kokulungisa i-welding, uburhabaxa obuphezulu, ukuqhuba kakuhle kwe-thermal kunye nobungakanani obuzinzileyo kunye nemilo yokusebenza iimeko.
Loluphi uhlobo lwento yenaliti esetyenziswa ekubunjweni kwenaliti inefuthe elikhulu ekukhetheni isinyithi sokubumba. Ukuba iarhente yokomeleza okanye enye iarhente yokuguqula yongezwa, njengefayibha yeglasi, umonakalo ekubunjeni mkhulu, ke ukhetho lwezinto kufuneka luqwalaselwe ngokubanzi. Izinto zeplastiki ezinamandla ze-PVC, i-POM, i-PBT; izinto zeplastikhi ezibuthathaka zi-PC, i-PP, i-PMMA, i-PA. Ngokubanzi, i-S136, i-1.231, i-6420 kunye nezinye ii-steels zomngundo zikhethelwe iiplastikhi ezomeleleyo, ngelixa i-S136, 1.2316420, i-SKD61, i-NAK80, i-pak90718, njl njl. Inokukhethwa kwiiplastikhi ezibuthathaka. Iimfuno zokubonakala kweemveliso nazo zinempembelelo enkulu kukhetho lwezixhobo zokubumba. Kwizinto eziselubala kunye neemveliso zesipili sokucoca umphezulu, izinto ezikhoyo ziS136, 1.2316718, NAK80 kunye nepak90420. Ukubumba kunye neemfuno elubala eliphezulu kufuneka ukhethe S136, kulandele 420. Ukuba kuphela ukuhlangabezana neemfuno zemveliso ngaphandle kokuqwalasela ixabiso kunye neendleko, isenokungabi umyili elungileyo, iindleko lemveliso ngumngundo nayo ephambili ephambili
(1). Inaliti machine yokubumba:
izixhobo zokubumba eziphambili zokwenza iiplastikhi ze-thermoplastic okanye ze-thermosetting kwiimo ezahlukeneyo zeemveliso zeplastiki ngumbumba wokubumba weplastikhi, umatshini wokwenza inaliti ethe nkqo, umatshini wokufaka inaliti emibini, umatshini wokubumba wombala, umatshini opheleleyo wombane. Umatshini yokubumba yenaliti, imisebenzi yayo esisiseko zimbini:
(a) Fudumeza iplastiki ukuze inyibilike.
(b) Uxinzelelo oluphezulu lusetyenziswa kwiplastikhi etyhidiweyo ukukhupha nokugcwalisa umqala. Iiparameter eziphambili zomatshini wokubumba inaliti zezi: ukubotshwa kwamandla, ubuninzi bevolumu yenaliti, ubuninzi kunye nobuncinci bobunzima besikhunta, ukubetha okuhambayo, ukutsala indawo yentonga, ukubetha kunye nokucinezelwa koxinzelelo. Amalungu anobukhulu obahlukeneyo, izakhiwo kunye nezinto, kunye nokubumba kobukhulu obahlukeneyo kunye neentlobo, iimodeli ezahlukeneyo kunye neeparamitha zoomatshini bokubumba inaliti kufuneka zikhethwe. Umatshini ziphene yombane ziphethe iingenelo ngesantya esiphezulu inaliti, ulawulo ngqo kunye nokusebenza kwemveliso eliphezulu. Isetyenziswa ziphene yokubumba ezinye iindawo ngqo.
(2) izixhobo Auxiliary:
(a) Isixhobo somatshini wokubumba isitofu sisixhobo semveliso esizenzekelayo esinokuxelisa eminye imisebenzi yamalungu aphezulu, kwaye sinokuyilawula ngokuzenzekelayo ukuhambisa iimveliso okanye ukusebenzisa izixhobo ngokweemfuno ezimiselweyo. Umlawuli unokuqinisekisa ukungaguquguquki komjikelo wokusebenza, ukuphucula umgangatho nokwenza kukhuseleke. Ngophuhliso olukhawulezayo lweshishini lokulungisa iplastiki e China, iqondo esizisebenzelayo kwezixhobo ziphene sukube iya isiba phezulu. Oomatshini bokwenza inaliti banamhlanje bahlala bexhotyiswa ngabaphathi bokuphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso.
(b) Isifudumezi seoyile / isicoci samanzi: ukufudumeza okanye ukupholisa ngamanzi ahamba ngaphakathi ekubumbeni, ukwandisa ubushushu besikhunta, ukuphucula umgangatho wobuso, okanye ukunciphisa ngokukhawuleza ubushushu besikhunta ukuphucula imveliso.
(c) Isixhobo sokomisa izixhobo: susa ukufuma kwizinto zeplastiki ngokufudumeza nangokuvuthela.
Inaliti umgca wemveliso yokubumba
Iindawo zeplastiki zokupeyinta umgca
Iiplastikhi zeplastikhi ezisetyenziswa ekubumbeni ngenaliti: Apha ngezantsi kukho ezona thermoplastics zixhaphakileyo ezisetyenziswa ekubumbeni ngenaliti: iAcrylonitrile Butadiene Styrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), yi-opaque thermoplastic kunye ne-polymer amorphous. ... Polyethylene. ... IPolycarbonate. ... IPolyamide (Inayiloni) ... Impembelelo yePolystyrene. ... Ipolypropylene
Izinto eziphathekayo Ukuxinana Umngundo
Ukuncipha Uphawu Ukusetyenziswa
Igram / cm3 %
IABS(Acrylonitrite Butadiene Isitayile) 1.04.0.08 0.60 Ubungakanani bezitali, iipropathi ezilungileyo zomatshini,electroplating lula, kulula ziphene yokubumba izindlu zeplastiki zeemveliso ze-elektroniki
I-PC (IPolycarbonate) 1.18 ～ 1.20 0.50 Amandla empembelelo elungileyo, ubungakanani obuzinzileyo kunye nokugquma okuhle.Ukuxhathisa ukubola nokumelana nokunxiba izindlu zeplastiki, ikhuselo lokukhusela, iindawo ezincinane zothumelo zeemveliso ze-elektroniki, iimveliso zombane
PMMA(Polymethyl methacrylate) 1.17 ～ 1.20 0.60 Inokuthunyelwa okuhle kwe-92% kunye nokuqina okuhle koomatshini.Inotshi amandla eempembelelo asezantsi, kulula ukuxinzelela ukuqhekeka Iilensi ezingafihliyo kunye neempawu zokucofa zedivayisi
I-PP(IPolypropylene) 0.89 ～ 0.93 2.00 Ine-shrinkage ephezulu, ukuxhathisa ukufuma,ukumelana nobushushu obuphezulu kwaye akukho lula ukukrazula.Wear ukumelana, kulula ukwaluphala, ukusebenza kweqondo lobushushu eliphantsi Izikhongozeli zokutya, iitafile, iibhokisi zeoyile zemicrowave, izikhongozeli zonyango
(ikloride) 1.38-1.41 1.50 Eqinile, enxiba enganyangekiyo, elungileyo yokugquma, Ukwenza ubunzima obunzima ngakumbi, ukungasebenzi kakuhle kobushushu obuphezulu Ukwenza imibhobho kunye neeprofayili
Nylon 1.12 ～ 1.15 0.7-1.0 Kunzima, ukunxiba okunganyangekiyo, ukumelana namanzi, ukudinwa ukumelana, usambathisa elungileyo. Ukuncipha okuphezulu, kwesikhokelo Izahlulo Machine, amalungu imichiza, iindawo zothumelo
I-POM (Polyacetel) 1.42 2.10 Iipropati ezibalaseleyo zomatshini, amandla aphezulu kunye nobulukhuni, nxiba ukuxhathisa kunye nefuthe ukuxhathisa. Uzinzo olushushu lwamafutha Izahlulo Machine, amalungu imichiza, iindawo zothumelo, iinxalenye zochuku kunye neendawo zokuhambisa ezisebenza kubushushu begumbi
TPU(Thermoplastic lyu) 1.05 ～ 1.25 1.20 Elastomer, ukunxiba enganyangekiyo, oyile ukumelana ukunyuka kobushushu obuphezulu kunye nobuphantsi, obungenatyhefu Ukusetyenziswa ngokubanzi kwezonyango, ukutya, iimveliso ze-elektroniki kunye nendawo enobushushu obuphantsi
Inkqubo yokubumba inaliti yinkqubo yokuba izinto ezinganyibilikiyo zinyibilikisiwe, zifakwe ngaphakathi, zipholile zaza zahlulwa ukuvelisa ubume obuthile bamalungu agqityiweyo. Inkqubo ziphene yokubumba iinxalenye zeplastiki ikakhulu kubandakanya izigaba-7. Ukumiselwa kweparameter -> ukuvala ukungunda-> ukuzalisa -> (ukuncediswa ngegesi, ukuncediswa ngamanzi) ukugcina uxinzelelo-> ukupholisa -> ukuvulwa komngundo -> ukutshabalalisa.
Isantya, uxinzelelo, indawo (ukubetha), ixesha kunye nobushushu ziiparameter ezintlanu eziphambili zenkqubo yokubumba yenaliti. Kwimveliso yokubumba yenaliti, ubukhulu becala ukulungisa le paramitha ukuphucula kunye nokufumana ubungakanani obufanelekileyo kunye nembonakalo.
Ezisixhenxe iteknoloji ziphene yokubumba
1.Ukubumba ngenaliti kabini
2. Inaliti yokubumba engaphezulu
3. Ukubumbela inaliti eshushu
3. IMD: in-umngundo inaliti yokuhombisa
4. Inaliti yamalungu amakhulu
5.Inaliti yokubumba iindawo eziqaqambileyo
6.Inaliti yokubumba iinxalenye zeemoto
7. Inxalenye yodonga olucekeceke
Sinokubonelela ngenaliti zakho zeplastikhi ezibunjiweyo kwiindawo ezahlukeneyo zesitofu esinokupholishwa kunye nomthamo we-0.1gram-10kgs oyifunayo. Ukongeza, sinako ukubumba ngaphezulu ukufaka imisonto, izixhumi zentsimbi okanye ezinye izinto zeplastikhi ezibunjiweyo ukunika imveliso yakho ukugqiba. Sub-iindibano nazo zingadalwa njengenxalenye yeenkonzo zethu zeplastiki ziphene sukube zipakishwe kwiimfuno zakho. Kukwasebenza kwanjalo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokugqiba, kubandakanya:
* Isingxobo seplastikhi yeChannel
* Imifanekiso yedijithali
* Ukuprintwa kwepad
* Ukukhusela i-RF
* Ukupakisha kunye ne-stillage's
* Inaliti yokubumba ulawulo lomgangatho Sikwabonelela ngezixhobo ezikhawulezayo, iiprototyping kunye neenkonzo zokubumba emva.
Ukubumba iziphene kunye nokusombulula ingxaki
Emva kokubumba, kukho umahluko othile phakathi kwamalungu eplastiki kunye nemilinganiselo yomgangatho omiselwe kwangaphambili (imigangatho yokuhlola), engenakho ukuhlangabezana neemfuno zenkqubo elandelayo. Esi sisiphene seplastiki, esoloko sibizwa ngokuba ziingxaki zomgangatho. Kuya kufuneka sifunde unobangela waleziphene kwaye sizinciphise zisezantsi. Ngokubanzi, ezi ziphene zibangelwa zezi zinto zilandelayo: ukungunda, izinto ezingezizo, inkqubo yeparamitha, izixhobo zeNdalo kunye nabasebenzi.
(1). Umahluko wombala: ukuba umbala weenaliti zokubumba iinxalenye wahlukile kwisampulu enye yombala ngamehlo ahamba ze, uya kugwetywa njengokwahluka kombala phantsi komthombo wokukhanya oqhelekileyo.
(2). Ukuzalisa ngokungonelanga (ukunqongophala kweglu): iinxalenye zokubumba inaliti azizalisanga, kwaye kukho amaqamza, i-voids, imingxunya yokuncipha, njl., Ezingahambelaniyo netemplate esemgangathweni, ebizwa ngokuba kukunqongophala kweglu.
(3). Warping deformation: imilo yezahlulo zeplastiki ziya kujika kwaye sijijeke emva kokonakalisa okanye kwixesha elizayo. Ukuba icala elithe tye lijonge ngaphakathi okanye ngaphandle, okanye icandelo elisicaba linamahla ndinyuka, ukuba unyawo lwemveliso alulingani, lubizwa ngokuba kukungafani, okunokwahlulwa kube kukungqubeka kwendawo kunye nokujikwa ngokubanzi.
(4). Amanqaku emigca ye-Weld (imigca): umkhondo womgama kumphezulu weplastiki, owenziwe kukudityaniswa kweeplastikhi ekubumbeni, kodwa ezinyibilikayo azifakwanga ngokupheleleyo kwindawo yazo, ukuze zingadityaniswa. Ubukhulu becala, zingumgca othe ngqo, ophuhla ukusuka enzulwini ukuya kubunzulu. Le meko inefuthe elithile kwinkangeleko kunye neempawu zoomatshini.
(5). Ukugqabhuka: umphezulu wenaliti ebunjiweyo yezahlulo ine-spiral okanye ilifu njengokuvutha, okanye ngaphakathi kwimveliso esekuhleni inepateni ye-wavy, ebizwa ngokuba yiripple.
(6). Ngaphezulu (flash, Cape).
(7). Umahluko wobukhulu: ukuncipha kunye ne-warpage yeenaliti ezibunjiweyo kwinkqubo yokubumba
2. Ukulawulwa komgangatho kunye nokuphuculwa: Kubandakanya iteknoloji kunye nolawulo
(1). Inqanaba lobuchwephesha: ukhetho oluchanekileyo lwezixhobo, uyilo lobume bemveliso, ukhetho lwezixhobo ezifanelekileyo zomngundo, ukwenziwa koyilo lobumbeko ukulungiselela ukugcwaliswa, ukukhutshwa kunye nokususwa kwezahlulo, ukusetwa okufanelekileyo komphezulu wokuzahlula, ukuhambisa ishaneli kunye nokungena kwerabha; ukusetyenziswa kwezixhobo zokubumba eziphambili okanye inkqubo.
(2). Inqanaba lolawulo: ulawulo lomgangatho wezinto ezingenayo, ukwenziwa kwemigaqo-nkqubo esemgangathweni kunye nemigangatho, uqeqesho lobuchwephesha, ukwenziwa kwenkqubo efanelekileyo yokurekhodwa, ukurekhodwa kwedatha kunye nohlalutyo, kunye nokusekwa kwenkqubo esemgangathweni yesandi.
Inkampani yakwaMestech ivelisa amakhulukhulu okubumba kunye nezigidi zeemveliso zeplastiki zabathengi balapha ekhaya kunye nehlabathi ngonyaka. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi okanye ukubuza malunga nekoteyishini malunga ziplastiki ziphene sukube, nceda uqhagamshelane nathi namhlanje.